अस्पतालमा बिरामी बढे, सफा पानी पिउन आग्रह « प्रशासन
४ श्रावण २०७४, बुधबार
नुवाकोट । वर्षायाम लागेसँगै पछिल्ला केही दिनयतादेखि नुवाकोटका अस्पतालमा ज्वरो र टाइफाइडका बिरामी बढेका छन् ।
ज्वरो, भाइरल फिवर, रुघाखोकीको ज्वरो, दम, टाइफाइडजस्ता रोगका बिरामीको संख्या बढेको त्रिशूली जिल्ला अस्पतालका डा. राजेन्द्र लामाले बताए । बर्खाको समयमा विशेषगरी पिउने पानीमा हुने प्रदूषणका कारण बिरामीको संख्यामा वृद्धि भएको अस्पतालले जनाएको छ ।
अस्पतालमा १०५ डिग्री सेल्सियससम्म उच्च ज्वरोका बिरामीसमेत उपचारका लागि आउने गरेको उनले बताए । अस्पतालमा दैनिक १०० जनासम्म बिरामी उपचारका लागि आउने गरेकोमा अधिकांश बिरामी ज्वरोको हुने गरेको डा. लामाले बताए । झोलिलो खानेकुरा खान, कडा परिश्रम नगर्न, खानपान र व्यायाममा ध्यान दिन बिरामीलाई सल्लाह दिँदै आएको उनले बताए ।
विशेषगरी नुवाकोट सदरमुकामसँग जोडिएका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट ज्वरोका बिरामी आउने गरेका छन् । डा. लामाले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले जिल्लाको केही ठाउँमा गरेको नमूना परीक्षणमा पानीमा दिसामा पाइने जीवाणु कोलिफर्म भेटिएकाले पानी शुद्धीकरण गरेर पिउन आग्रह गरे ।
रातमाटे, विदुर, कोलनी, तुप्चे, गेर्खु र काउलेको खानेपानीको परीक्षणमा कोलिफर्मको मात्रा ३० देखि ६० सम्म रहेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । रासस
Tags : बिरामी सफा पानी
3 December, 2021 4:12 pm
२४ घण्टामा थप २४६ जनामा कोरोना पुष्टि, ३४७ जना संक्रमणमुक्त
काठमाडौँ । पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर थप २४६ जनामा कोरोना
3 December, 2021 1:03 pm
टेकु अस्पतालको इमर्जेन्सी सेवा निःशुल्क
काठमाडौँ । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, टेकुको इमर्जेन्सी
3 December, 2021 7:12 am
‘कोभिड महामारीमा जथाभाबी औषधि सेवन गरेकामा स्वास्थ्यसम्बन्धी असर देखिन थाल्यो’
काठमाडौँ । कोभिड–१९ को महामारीका बेला भएको लकडाउन र अस्पतालबाट
2 December, 2021 8:38 pm
२५ विद्यार्थीमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएपछि विद्यालय बन्द
गलकोट । विदेशमा कोरोनाको तेस्रो भेरियन्टको त्रास बढिरहेको सन्दर्भमा बागलुङमा